हेलिकप्टर लिलामीमा बेच्दै सेना - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
/ Tue, December 18, 2018
हेलिकप्टर लिलामीमा बेच्दै सेना
फागुन १० गते, २०७४ - ०९:४४
काठमाडाै । नेपाली सेनाले थोत्रो भनेर लिलामीमा राखेको एउटा हेलिकप्टर अफ्रिकी आकाशमा उड्ने भएको छ । नेपाली सेनाले नौ हवाई साधन र तिनका पार्टपुर्जा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको ६ महिना बढी भइसकेको छ ।
अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ- लगातारका टेन्डरपछि ४ हेलिकप्टर बिक्री प्रक्रिया अघि बढेको छ । सेनाको हवाई निर्देशनालयले लिलामीमा राखिएका सबै हवाई साधन र पार्टपुर्जाको कुल न्यूनतम मूल्य ६५ करोड ७६ लाख ५८ हजार निर्धारण गरी बोलकबोलमा बिक्री घोषणा गरेको थियो । एक सैनिक पुमा हेलिकप्टर बिक्री भएको छ ।
विशिष्ट व्यक्तिका लागि उपयोग गरिएका दुई सुपरपुमा र सेनाले प्रयोग गरेको अर्को एउटा हेलिकप्टर पनि बिक्रीमा राखिएको थियो  . एजेन्टमार्फत बिक्री गरिएको उक्त पुमा हेलिकप्टर छिट्टै अफ्रिकी मुलुक पुग्नेछ । अफ्रिकी महादेशमा रहेका आफ्ना सेनाका अधिकृतहरूमार्फत सेनाले बिक्रीको लबिइङ गरिरहेको छ ।
उक्त पुमा सामान्य मर्मतपछि उडान भरेरै लैजाने वा प्लेनमा लगेर उतै मर्मत गर्ने भन्ने निश्चित भएको छैन । उक्त हेलिकप्टर मर्मतपछि राम्रै उडान भर्न सक्ने निष्कर्ष खरिद गर्ने एजेन्टको छ । सेनाले मर्मतमा धेरै खर्च लाग्ने भन्दै यस्ता हेलिकप्टर र त्यसमा उपयोग हुने पार्टपुर्जा बिक्री गर्न लागेको हो । धेरै पटक मर्मत गर्नुभन्दा नयाँ खरिद प्रक्रिया मुलुकको हितमा रहेको निष्कर्षमा सेनाको छ ।
हेलिकप्टर किन्ने मुलुकको नाम नखुलाइए पनि यो अफ्रिकी महादेशमा आर्थिक उन्नति हासिल गर्दै गरेको मुलुकमा उड्ने निश्चित भइसकेको सेनाको उच्च स्रोतले जनायो । यो हेलिकप्टरको बिक्रीमा सेनाभित्रैबाट प्रश्न पनि उठेको छ । मर्मत गरेर उडान भर्न सक्ने हेलिकप्टर ‘कवाडी’ को भाउमा बिक्री गर्न लागिएको भन्दै सेनाका केही अधिकारीले जिज्ञासा राख्ने गरे पनि चेनअफ कमान्ड मानेर थप नबोलेको स्रोतले बतायो ।
‘धेरै छलफल र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरेर मूल्य निर्धारण गरेका छौं,’ हवाई निर्देशनालय निकट एक अधिकारीलेआफ्नो बचाउ गरे ।बिक्रीमा राखिएका अरू दुई हेलिकप्टर र एक एभ्रोका लागि १० प्रतिशत रकम जम्मा भइसकेको सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले कान्तिपुरलाई बताए ।
‘एभ्रो जुन मुलुकमा लैजान लागिएको हो, त्यो मुलुकको स्विकृतिलगायतका प्रक्रियाका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । दुई सुपर पुमाबारे भने छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । सेनाले आफूसँग रहेका तीन थान पुमा/सुपर पुमा हेलिकप्टर, एक चिता हेलिकप्टर, एभ्रो हवाईजहाज, दुई एलौट हेलिकप्टर र दुई एमआई १७ हेलिकप्टर र त्यसका पार्टपुर्जा लिलामको तयारी थालेको थियो ।
तीनपटक लगातार टेन्डर आह्वान गरे पनि सबै बिक्री हुन सकेको छैन । बेलायतले नेपाललाई उपहार दिएको एमआई हेलिकप्टरको भने उत्पादन कम्पनीको लाइसेन्स नभएकाले बिक्रीमा समस्या आएको छ । एमआई १७ को अन्य सामग्री बिक्री नभए पनि ‘बडी’ बिक्री हुन सक्ने सैन्य अधिकारीहरूले बताए ।
‘ह्यांगर’ खाली गराउन भए पनि यी हेलिकप्टर निकै कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने बहस सेनामा चलेको थियो । सेनाले टेन्डरमा राखेकामा विभिन्न समयमा खरिद गरिएका बाहेक भारत सरकारसँग सैन्य सहयोगअन्तर्गत सहुलियतमा लिएका पनि छन् । नेपाली सेना आफैंले टेन्डर आह्वान गरेर लिएका हवाई साधन पनि लिलामी गर्न लागेको हो ।
सेनाले अहिले आठै पृतनामा उनीहरूकै कमान्डअन्तर्गत उद्धारका लागि एक/एक हेलिकप्टर, केन्द्रमा पनि केही हेलिकप्टर र स्काई ट्रक राख्न जोड गरेको छ । त्यसअन्तर्गत तीन हेलिकप्टर सेनाले खरिद गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । त्यस्तै, चार स्काई ट्रक अमेरिकी सरकारले सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराउँदै छ ।
सेनाको हवाई निर्देशनालयले दुई थान सुपर पुमा र त्यसका पार्टपुर्जालाई ३१ करोड ६६ लाख न्यूनतम बोलकबोल मूल्य तय गरेको छ । दुई एमआई १७ को मूल्य २० लाख रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य राखेर लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । पुरानो एलौटका मूल्य ५० लाख र १ करोड राखिएको छ ।
सरकारले एउटा हेलिकप्टर र दुई थान जहाज खरिदका लागि बजेट निकासा गरेसँगै सेनाले आफूसँग भएका हवाई साधन लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
रक्षा मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सेनाले तय गरेको न्यूनतम लिलाम मूल्य वैज्ञानिक नभएको गुनासो आइरहेकामा निकै कम न्यूनतम मूल्य राख्दा पनि हालसम्म सबै हवाई साधन बिक्री हुन सकेको छैन । सेनाको हवाई सामग्रीको मूल्य अलि धेरै राखिएको भए पनि थोत्रा हेलिकप्टरको मूल्य भने निकै न्यून राखिएको छ । तर पनि खरिदकर्ताहरू यसमा आकर्षित हुन नसकेको सेनाले जनाएको छ ।
फागुन १० गते, २०७४ - ०९:४४ मा प्रकाशित
निर्मला पन्तकी आमाले हालिन एसपी पन्त बिरुद्ध किटानी जाहेरी
कन्चनपुर । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याबारे प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै निर्मलाकी...
काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन यही पुस ११ गते बुधबारका...
ईन्जिनियर्स एसोसियशनमा प्रगतिशिल प्यानल बिजयी
काठमाडौं । नेपाल ईन्जिनियर्स एसोसियशनको केन्द्रीय अध्यक्षमा प्रगतिशिल प्यानलका प्रा.डा.त्रिरत्न...
मृत्यु समय बारे वैज्ञानिकहरूकाे यस्ताे शाेध
मृत्यु अवश्यंभावी छ । मृत्युका बारेमा विभिन्न समयमा विभिन्न शाेधहरू भइरहेका छन् । हालै वैज्ञानिकहरुले...
नेकपाको बैठकमा १० जना स्थायी समिति सदस्यले राखे आफ्ना धारणा
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटिको आजको बैठकमा अध्यक्षको प्रतिवेदनमा १०...
मेलम्चीको जिम्मा पाएको इटालियन कम्पनीका आठ बिदेशी पक्राउ
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण जिम्मा लिएको इटालियन कम्पनी सिएमसीका आठ जना विदेशी कर्मचारी...
पोखरा । पोखरा महानगरपालिका–१३ भद्रकाली चोकमा आज करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । नयाँ घरमा काम...
विद्यार्थीहरुबाट क्याम्पस प्रमुखलाई कालोमोसो
धनुषा । जनकपुरको रामस्वरुप रामसागर बहुमुखि क्याम्पसका प्रमुखलाई विद्यार्थीहरुले कालोमोसो दलेका...
कर्मचारी संगठनद्वारा आन्दोलनको घोषणा
काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै कर्मचारीका विभिन्न संघ संगठनहरुले आन्दोलनको...
विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक शक्ति एक हुुनुपर्नेः अध्यक्ष प्रचण्ड
पाल्पा । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मलुकको...
सातवटै प्रदेशका उपसभामुखको एकै स्वरः महिला भनेर हेपियो
भिभिआइपीलाई हेलिकोप्टर : खरिद प्रक्रियामै त्रुटि
एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकारको १३ करोड खर्च
भोज खाएर सुतेका ३ जनाको मृत्यु
वैद्यले भने, नेपालमा सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी आवश्यक भएकाले विप्लवसँग छिट्टै एकता हुन्छ
मलेसियाको रोजगारी ढिलाईमा को जिम्मेवारी ?
नाकाबन्दी लगाएको डेढ वर्षपछि झनै बलियो बन्यो कतार
बैठकमा बादललाई घन्टी बजाउने जिम्मा
नेकपामा नेतृत्व आलोचनाः पूर्वएमाले खरो, माओवादी नरम
निर्मला प्रकरण छानबिन प्रतिवेदनको निष्कर्ष : अनुसन्धानमा चरम लापरबाही
नेकापा फुटाएर जनयुद्धको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने किराँतीको घोषणा
तेल ढुवानीमा ‘भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम’ को तयारी